Ireo lisitra eto Avaradrano Alohan'ny fifidianana depiote 2019 | Hevitra MPANOHARIANA |
Ireo lisitra eto Avaradrano Alohan'ny fifidianana depiote 2019
2019-05-14 @ 18:06 in Ankapobeny
Araka ny mety ho voamarikareo any anatin'ny soratako any dia aty amin'ny kaominina avadrano aho no monina, dia araka izay hitako sy ny fandinihako eto an-toerana ihany no soratako. Folo ny isan'ny lisitra mifaninana, ao anatin'izany daholo ny efa depiote teo aloha na ny tsy niova antoko na ny namadika palitao, fa ny zavatra iray mahavariana dia ny fifaninanan'ny ben'ny tanàna ho amin'izany toerana izany.
Mampanontany tena hoe ny depiote be izany no ambony kokoa noho ny Ben'ny tanàna raha mifandrombaka ho amin'izany ireto olona ireto. Raha eo amin'ny haben'ny fari-pifidianana aloha dia lehibe kokoa noho ny an'ny ben'ny tanàna ny an'ny depiote, tahaka izany ihany koa ve ny eo amin'ny tombontsoa hafa? Tsikaritra fa Ben'ny tanàna avokoa ny ao anatin'ny lisitry ny IRD (Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina), olona tsizoviana amin'ny maro noho izany no mirotsaka ary fahazoana tombony hafa kokoa izany manoloana ny hafa.
Misy ihany koa ny Ben'ny tanàna mirotsaka amin'ny anarany manokana, olona avy amin'ny faritra hafa eto amin'ny distrika ihany koa ireo miray lisitra aminy. Olona nahavita be teo amin'ny kaominina iadidiany, sady manankarembe (Sabotsy Namehana) izany ka maro amin'ny olona mahalala azy ihany koa no vonona handrotsa-bato ho azy raha ny afidy manoloana ny trano no itarafana azy. Ny tsinjo dia maro amin'ireo nametaka afisin-dRavalomanana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo mametaka ny afisin'ity lisitra mahaleotena Avoty Avaradrano ity. Izy anefa dia nanohana mafana fo an'i Andry Rajoelina, filoham-pirenena, fa tsy tafiditra anaty lisitra IRD ka nanangana lisitra manokana ho azy. Ny mpifaninana mivantana amin'ny TIM ka maka ny ampahany maro amin'ny mpifidy azy eto Avaradrano, tsy lavitra loatra an'i Sabotsy, noho izany dia ity lisitra ity. Antoko hafa mifaninana ihany koa ny ADN sy ny AREMA, ary any amin'ny takotakona any dia misimisy ireo trano sady mametaka afisy AREMA amin'ny tranony no mametaka afisy IRD ihany koa.
Ary hafahafa kokoa noho izay ireo lisitra mahaleotena tsy ho hay izay apoakany na dia misy aza ny miezaka fatratra mampafantatra ny tenany. Lisitra iray sisa no tsy fantatra mihitsy hoe mba iza koa ary io satria tsy misy afisy na zavatra hafa mety hamantarana azy mihitsy fa dia any amin'ny efitra fisainana angamba vao ho hita hoe mba iza ity nandany 5.000.000 ariary amin'ny tsy antony ity.